Somaliland Archives - Page 7 of 7 - Puntland Mirror Believable Media Website
February 15, 2017 Puntland Mirror 0
Hargeysa-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka maamulka Somaliland ayaa xiray wariye Cabdimaalik Muuse Cooldoon, sida ay sheegayaan wararku. Coldoon oo kasoo jeeda maamulka Somaliland ee waqooyiga Soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyay joogay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Maanta […]
December 22, 2016 Puntland Mirror 0
Addis Ababa-(Puntland Mirror)Wadahadal ay asbuucaan ku yeesheen magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya ayay heshiis hordhac ah ku gaareen Somaliland iyo Khaatumo. Labada dhinac ayaa ku heshiiyay qodobada hoos ku qoran: In wadahadal iyo […]
December 21, 2016 Puntland Mirror 0
Dubai-(Puntland Mirror) Dalka Isutaga Imaaraatka Carabta ayaa saxiixay heshiis ah in uu saldhig milatari ka samaysto maamulka Somaliland ee Soomaaliya. Saldhiga milatari oo cusub ayaa laga dhisi doonaa magaalo xeebeedka Berbera ee maamulka Somaliland ee […]
July 22, 2016 Abdi Omar Bile 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Maamulada Puntland iyo Somaliland ayaa kala qaaday ciidamadooda oo beryahan isku hor fadhiyay gobolka Sanaag, sida ay wararka sheegayaan. Ciidamada Puntland ayaa dib ugu noqday halka la dhaho Kala-dhaca oo u dhow laamiga […]
July 18, 2016 Abdi Omar Bile 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa maanta oo Isniin ahayd ku dagaalamay gobolka Hayland, sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo saraakiisha. Dagaalka u dhaxeeya labada dhinac oo la isku adeegsaday hubka culus ayaa bilaabmay […]
Hargeysa-(Puntland Mirror) Ciidamada amaanka maamulka Somaliland ayaa xiray fanaanka Soomaaliyeed, Farxan Xidig. Sida wararka sheegayaan fanaanka ayaa laga qabtay magaalada Boorame kadibna waxaa loo gubiyay caasimada maamulka Somaliland, Hargeysa. Warar lagu kalsoonaan karo ayaa […]